Iwe unoziva ese maficha akauya kuMamepu neIOS 10? | IPhone nhau
Kunge iOS 9 gore rakapfuura, iOS 10 haisi vhezheni yakanyanya yeIOS, uye neizvi ndinoreva kuti haina kusanganisira nhau dzakatanga kufadza zvakanyanya senge dhizaini nyowani yeIOS 7 kana mawijeti, echitatu-bato kiyi uye Kuenderera mberi kana Handoff kubva kuIOS 8, asi izvo hazvireve kuti hapana chitsva. Musiyano ndewekuti iOS 9 uye iOS 10 yakagamuchira zvimwe zvakawanda kupfuura nhau kuti vakwanise kutaura nezvazvo, senge chishandiso chitsva Mepu izvo mukati iOS 10 zvirinani kwazvo.
Mune ino posvo isu tichataura nezvese zvitsva zvakauya kuMamepu muIOS 10 kunyangwe, sezvamunoziva, idzi nhau dziri zviripo paruzhinji kubva munaGunyana apfuura. Isu tinotaura pamusoro pavo izvozvi nekuda kwezvikonzero zviviri: isu tatoona zvese nhau uye, mukuwedzera, isu tatoziva 100% yechokwadi mashandiro anoita vamwe, sekurangarira kwatakamira mota yedu.
1 IOS 10 Mamepu: Nyowani Dhizaini uye Yekutsva Panel
2 IOS 10 Mepu dzinoyeuka kwataive takamira
3 Kuvandudzwa kwekutsvaga
4 Kuwedzeredzwa kune kunyorera
5 Tsvaga mukati merwendo
6 Panoramic maonero uye Zoom apo isu tichifamba
7 Mikana yekudzivirira mitero nemigwagwa mikuru
8 Chii chandaizobvunza Mamepu muIOS 11?
IOS 10 Mamepu: Nyowani Dhizaini uye Yekutsva Panel
Chinhu chekutanga chatakaona / tichaona kana tichivhura mamapu eIOS 10 kekutanga dhizaini yayo nyowani. Chinyorwa ikozvino chakakura uye chakajeka, asi chinonyanya kurova i kutsva bhokisi izvo zvichave zvichioneka zvisingaite nguva dzose. Isu tinongomira kuona bhokisi pasi pekufungidzira kuviri: patinenge tichitsvaga uye kana tatsvaga, panguva iyoyo bhokisi rinonyangarika uye rinoratidza mhedzisiro ne "X" (padyo) kurudyi.
Bhokisi rekutsvaga riri pamusoro pevamwe mhedzisiro inogona kutifadza iyo yatinozowana kana tikatsvedza pani kumusoro. Kana, semuenzaniso, zuva rega rega masikati tichienda kunzvimbo imwechete, chero zvazvingava, nzvimbo iyoyo inenge yakatimirira muchikamu chino.
IOS 10 Mepu dzinoyeuka kwataive takamira
Uku kukura kunonakidza uko, nekuda kwekushayikwa kweruzivo, kwakatungamira mukukanganiswa pawakawanikwa. Kutanga, tinofanirwa kuimaka kubva paMagadzirirwo / Mepu / Ratidza mota yakamiswa, uye kuenderera tinofanirwa kuve nechigadzirwa cheBluetooth, senge redhiyo kaseti, mumota kuitira kuti, kana isina kubatika, iyo system izive kwatinako akasiya mota.
Kana tisina ichi chinongedzo cheBluetooth mumotokari, nguva dzose tinogona kuudza siri "Yeuka kwandakamisa mota" kuchengetedza nzvimbo yako kana "Kanganwa kwandakamisa mota" kuita saizvozvo. Asi zvinofanirwa kutariswa kuti mutauro wega wega kana musiyano wemutauro mumwe chete unoshandisa mazwi akasiyana, saka mazwi apfuura anogona kusashanda kune dzimwe nyika kunze kweSpain.
MuIOS 10, kutsvaga kweMepu kuri nani, kutanga nemavara makuru uye maacon, kusefa nezvikamu, uye kupera nemhedzisiro yakamisikidzwa yekutsvaga kwakabatana.
Kuwedzeredzwa kune kunyorera
Iyo Mepu app muIOS 10 inotsigira zvinowedzerwa, chimwe chinhu chakafanana nekwaniso nyowani yeSiri yekutumira WhatsApp ichikumbira mubatsiri wedu chaiye. Kana zviri zveMepu, semuenzaniso, tinogona kutsvaga nekubata paresitorendi, panguva iyoyo patinogona kuona maonero emamwe masevhisi kana kukumbira Uber kuti itiendese ikoko.
Tsvaga mukati merwendo
Isu tatove tatsanangura kuti imwe yenzira dzekubvisa iyo iOS 10 Mepu yekutsvaga bhokisi yaive yekutanga kubhurawuza. Pasina iri bhokisi, tinogona here kuramba tichitsvaga mapoinzi ezvekufarira? Mhinduro yedzidziso ndeyekuti hongu uye ndiwo maratidziro ainoita mu peji yepamutemo Apple, asi icho chinhu chandisina kukwanisa kuona kuSpain, handizive kuti nei. Chero zvazvingaitika, sarudzo inofanirwa kuoneka nekusimudza bhari yekufambisa pazasi, patinozoona sarudzo dzeGesi Stations, Kudya kwemangwanani uye Kofi
Panoramic maonero uye Zoom apo isu tichifamba
Sezvo ndashandisa TomTom, Sygic, Garmin kana Pano WeGo (yaimbova Nokia Mepu), pakati pevamwe, kwemakore, zvakandishamisa kuti izvi zvaive zvisingaite pamamepu eApple. Iye zvino zvatove tinogona zoom kana pinda panoramic maonero patiri kuongorora. Basa racho rinotsigirawo otomatiki kuona kugadzirisa pamugwagwa uri kumberi.
Mikana yekudzivirira mitero nemigwagwa mikuru
Chimwe chiitiko chinofanirwa kuve mune chero GPS yekufambisa software. Zvino tinogona kutyaira chete mumigwagwa yakajairika tisingafanirwe kupfuura nemitero nemigwagwa mikuru, inozonyanya kubatsira kana, semuenzaniso, tiri kutyaira moped. Tinogona kumisa / kudzima sarudzo kubva kuZvirongwa / Mepu / Kutyaira uye kufamba / Dzivisa (nekumaka tichazvidzivirira). Nechekuita haina kuongororwa.
Chii chandaizobvunza Mamepu muIOS 11?
Ini pachangu, ndinoda Apple Mepu uye ini ndinowanzoishandisa, asi ini ndinofunga kuchine nzvimbo yekuvandudza. Kutanga, ndinofanira kunatsiridza zvawatsvaga. Ndingada zvakare kukwanisa kuzvishandisa kunze kwenyika, nekuti isu hatisi nguva dzose munzvimbo yakafukidzwa uye hauzomboziva zvinogona kuitika. Kune rimwe divi, chimwe chinhu chandakarasikirwa muzhizha rino mukana wekugadzira nzira dzemabhasikoro. Parizvino, iko kunyorera kunotibvumidza kusarudza pakati pekutakurwa neruzhinji, nemotokari kana netsoka, asi ini ndinosuwa nzira yebhasikoro inowanikwa pane Pano WeGo, semuenzaniso.
Iwe unofunga chii iOS Mepu isipo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Iwe unoziva ese maficha akauya kuMamepu neIOS 10?
Zvakanaka, ndinokukumbira nzira dzine zvifambiso zveruzhinji.
Mhoroi, Pablo. Iyo yeruzhinji yekutakura sarudzo ndeye. Kana iwe ukabaya pa "nzira nemotokari", saka unogona kusarudza kutakura veruzhinji, ndechimwe chinhu kuwana sarudzo.
Ini ndinofunga zvinoshaya kuti ini ndakakuzivisa iwe nezve ma radar, uye kugona kusarudza kunzvenga mitero nemigwagwa mikuru panguva yekuzivisa kwairi kuenda, kwete kuenda kune marongero acho
Ini ndaizovabvunza zvakananga kuvhura mamapu eGoogle ku carplay, nekuti HAKUNA RUVARA, ndine hurombo, ndinoda iphone yangu, asi kufamba kwemepu kunotyisa.